Amasistimu eDredge Wokwenqaba & Ukulungiswa KweDamu - i-Ellicott Dredges
Ukususa i-silt, isihlabathi, kanye no-gravel, kusuka ngemuva kwedamu futhi eduze nokufinyelela kwalo kubalulekile ekusebenzeni kahle kohlelo lokuphehla ugesi.
Ukwakhiwa kwenhlabathi kunciphisa ukukhiqizwa kwamandla kagesi nedamu lamanzi ekugcineni kudinga ukudonswa ukulawula ukusebenza kahle. Ezinqolobaneni zamanzi, indle ekhukhulayo ingakha kancane kancane futhi ibangele ukugcinwa kwamanzi okugxile nezinkinga zekhwalithi yamanzi.
The I-Ellicott Series 670 Dragon® dredge futhi Uchungechunge 870JD Jet Dragon® I-dredge yomibili imigwaqo ephathekayo yokusika ikhanda elungele amaphrojekthi wokugcina ephindaphindwayo ukususa udaka, isihlabathi kanye nohlalu ngemuva kwamadamu, amadamu namabhagera.
Ukugcinwa KweDamu le-Hydro
Sebenzisa i-dredge ukuqeda udaka, okuhle, isihlabathi, i-gravel, nenye imfucumfucu evela ngemuva kwedamu nasezintweni zalo ezitholakalayo ezifana nesakhiwo esinjengeDamu leHoover eLas Vegas, eNevada (USA) noma eRappode Dam laseJalimane kungumsebenzi obalulekile oqinisekisa ukusebenza kahle kohlelo lokwenziwa kwamandla kwedamu kanye nokulethwa kwezinga lamanzi okufanele.
Ukugeleza kwamanzi ngokwemvelo kuvame ukudala isidingo sokwemba njalo amadamu ezindaweni ezinjengeGuatemala noma iSingapore. Ngokwengeziwe kokumba phansi usawoti noma amatshe ezimayini, ukudonswa kwedamu kungenye yezindlela ezenziwa kakhulu zokwenziwa kabusha komhlaba. Izidamu zinikela ngamachibi amanzi okuphuza abantu baseMalaysia namandla kubomdabu base-Uganda phakathi kwezinye izindawo emhlabeni jikelele.
Izindleko zokwemba kabusha ukonga amachibi acishe zizikhokhele zona ngenxa yeqiniso elilula lokuthi amadamu futhi asebenza njengomthombo wokudla wemvelo nendawo yokuhlala yezitshalo nezilwane eziningi eziphilayo. Ukuguguleka kwemvelo, ukungcoliswa kwamanzi nokugawulwa kwamahlathi konke kunomthelela ekuvaleni amadamu ngodaka nolunye udoti okusongela le mithombo yemvelo. Ukudonswa phansi ngumsebenzi wokulungisa odingeka kakhulu wamachibi emhlabeni wonke.
Noma zijwayelekile ngosayizi omncane, ama-barrage asadinga ukunakekelwa okujwayelekile ukuqinisekisa amandla nokukhiqizwa kwamandla. I-Ellicott's cutter suction dredges ilungele lawa maphrojekthi asayizi - ikakhulukazi lawo asezindaweni ezikude lapho kungathunyelwa khona imishini emikhulu.